Mkpọchi ọnụ ụzọ Magnetik 600Lbs na ndị nrụpụta na ndị na -eweta ihe mmetụta - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Mkpọchi Magnetik > Mkpọchi Magnetic 600Lbs > Mkpọchi ọnụ ụzọ Magnetik 600Lbs nwere LED na njikọ ihe mmetụta
Mkpọchi ọnụ ụzọ Magnetik 600Lbs nwere LED na njikọ ihe mmetụta
Ewezuga ihe ngosi LED, enwere ike ikewa ya n'ime mkpọchi eletriki ụzọ abụọ. ọnụ ụzọ iko, ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ ọkụ, ọnụ ụzọ na -amị amị na ọnụ ụzọ ígwè ka a ga -etinye. Inbuilt kọntaktị akpọchiri mkpọpụta ọkwa akara ngosi (NO, NC, COM), mmepụta ọkwa ọnọdụ ụzọ (NO, NC, COM) na -eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche.
Nlereanya:YM-280N (Ikanam) -DS
Ewezuga ihe ngosi LED, enwere ike ikewa ya n'ime mkpọchi eletriki okpukpu abụọ, ọnụ ụzọ iko, ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ ọkụ, ọnụ ụzọ na -amị amị na ọnụ ụzọ igwe. Inbuilt kọntaktị akpọchiri mkpọpụta ọkwa akara ngosi (NO, NC, COM), mmepụta ọkwa ọnọdụ ụzọ (NO, NC, COM) na -eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche.
Nnwale nnwale Collinear 280kg, 600pound.
Kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ iko, ọnụ ụzọ igwe, ọnụ ụzọ ọkụ.
LED na -egosi Ọnọdụ ọnọdụ.
Ihe mmetụta mkpọchi mkpọchi (NO/NC/COM)
Mmetụta Ọnọdụ ọnụ ụzọ (NO/NC/COM).
Nha 250Lx48.8Wx27.9H (mm)
Ikanam Ihe ngosi na -acha ọbara ọbara akpọchiri akpọchi; Green na -egosi agbachi
Mgbapụta mgbama mkpọchi O nweghị mgbe akpọchi na NC maka ịkpọghe (Voltage <30VDC; Ugbu a <0.5A)
Mmepụta Ịrịba Ama OZU/NC/COM Ọnụ Ọpụpụ Mgbama Ọnọdụ Ọnọdụ
Tags na-ekpo ọkụ: Mkpọchi ọnụ ụzọ Magnetik 600Lbs nwere LED na ihe mmetụta njikọ, ndị na -emepụta ihe, ndị na -ebubata ihe, ụlọ ọrụ, ahaziri, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ego, zụta ego, ọnụ ahịa, ndepụta ọnụahịa, nkwupụta, CE, ISO9001, Ogo